Fadhigii Baarlamanka maanta oo furmi doona goor dhaw | KEYDMEDIA ONLINE
Fadhigii Baarlamanka maanta oo furmi doona goor dhaw
Waxaa lagu wadaa daqiiqadaha soo aadan in uu furmo kulan weynihii horay loo iclaamiyay ee Ajandihiisu ahaa ka doodista Mooshin ku saabsan Doorashooyinka !
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxaa lagu wadaa daqiiqadaha soo aadan in uu furmo kulan weynihii horay loo iclaamiyay ee Ajandihiisu ahaa ka doodista Mooshin ku saabsan Doorashooyinka kaasoo xalay farriinta loogu diray Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Saacado kahor waxaa warbaahinta hor yimid Taliyaha ciidanka Booliska Gobolka Benaadir Saadaq John oo u sheegay bulshada Soomaaliyeed in uu is hor taagay kulankii Baarlamanka ee maanta, kaasoo sida uu sheegay la damacsanaa in lagu sameysto muddo kororsi!
Wax yar kaddib ayaa warbaahinta dowladdu daabacday xil ka qaadis lagu sameeyay Taliye Saadaq John, waxaana ammaanka goobta uu shirku ka dhacayo ku sugan ciidamda AMISOM oo baaritaan xoog leh ku sameynaya shakhsiyaadka galaya gudaha Villa Somalia iyo xarunta KMG ee Golaha Shacabku ay ku shirayaan ee Villa Hargeysa.
Howlwadeenada Xarunta Golaha Shacabka ayaa u sheegay bulshada in uusan jirin wax isbadal ah oo ku yimid kulankii maanta, waxaana hadda ku sugan gudaha xarunta uu shirku ka dhacayo qaar kamida Xildhibaanada, inkastoo ay jiraan qaar dib ulaabtay markii la is hortaagay oo loo diiday in ay galaan gudaha xarunta Villa Somalia.